I-Redmi ene-Snapdragon 855 iya kufika ngaphandle kwescreen sensor yeminwe | I-Androidsis
UXiaomi usebenza nzima ukuzisa isixhobo esitsha I-Redmi ene-Snapdragon 855, eya kubizwa I-Redmi Pro 2, ngoMeyi okanye ngoJuni. Ngaphambi kokuba lo mhla ufike, itiers ezininzi ezivela kuLu Weibing, umphathi jikelele weRedmi, sele etyhile okuninzi malunga nesiphelo esiphakamileyo.
Ngokusekwe kukuvezwa kwesigqeba ku-Weibo, kubonakala ngathi URedmi angalahla isivamvo somnwe kwiminwe eskrinini kwisixhobo. Kuyacaca ukuba inkampani izakususa ezinye izinto ukwenza ukuba ibe noqoqosho ngakumbi.
U-Lu Weibing uphendule ngokungathandabuzekiyo i-in-display sensor yeminwe ibiza kakhulu, xa ubuzwa ngumsebenzisi weWeibo malunga nobukho benzwa yeminwe kwisixhobo seflegi esizayo. Ibanga ukungabikho kwe-in-display sensor yeminwe kwisixhobo esitsha.
Iimpawu zokubonisa iminwe zeminwe ziqhelekile kuzo zonke izixhobo zeflegi ngoku kunye nexesha elifutshane. Uninzi lwabenzi be-smartphone baseTshayina abanjengo-Oppo, iVivo, iHuawei, kunye ne-OnePlus bayenze lula le nto yokuvula kubasebenzisi babo. Nangona kunjalo, ikwaqalisile ukuvela kwizixhobo ezithile ezifikelelekayo, ezinje nge Na K1.
Iingxelo zamva nje zibonisa ukuba I-Redmi ene-SD855 iya kuthwala imodyuli yekhamera ezibandakanya i-32-megapixel sensor. Ngasemva, kuyakubakho imodyuli yekhamera kathathu exhotyiswe nge-48 MP + 8 MP + 13 MP ephambili yekhamera. Ukongeza, kuya kubakho i-3.5mm i-jack audio kunye ne-NFC yokukhutshelwa kwentlawulo ngokukhuselekileyo nangokukhawuleza.
Kusenokwenzeka ukuba kunjalo Esona sixhobo sitshiphu Snapdragon 855 kwintengiso kwaye iyaqalisa kungekudala. Silindele ukuba ulwazi oluninzi luvele ngaphambi kokumiliselwa kwayo, njengoko umenzi waseTshayina sele egqibile ukugcina ifowuni ukuze ihlangabezane nemfuno.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Redmi ene-Snapdragon 855 inokuvela ngaphandle kwe-in-screen sensor yeminwe
Iiphikseli zikaGoogle azithengisi njengoko kulindelwe